SAMOTALIS: DIMUQURAADIYAD: DAWLAD MASUUL AH OO DADKA MATASHA Q4- Ahmed Arwo
DIMUQURAADIYAD: DAWLAD MASUUL AH OO DADKA MATASHA Q4- Ahmed Arwo
"kolka cod bixiyo garto awoodiisa siyaasadeed, iyo inuu isagu yahay isha ay ka unkanto awoodda dawladdu,Wakiilo iyo Xukuumadba, ayaa ay taabogal tahay dimuquraadiyaddu."Ahmed Arwo
Aan ku bilaabo hanbalyo iyo bogaadin Madaxweynha isbedelka ku sameeyey xukuumadda iyo xubnaha ku soo biiray. Waa sunnaha dimuquraadiyadda in kolba cidi qabato xilka. Waxaan xubnaha cusub dhaamaan u rajeynayaa inay noqdaan xilqaad xilku damqo oo dhab u garta cidda ay hawsha u hayaan, inay la yimaadaan wadashaqayn (Teamwork) Illaheyna waxaan uga baryayaa inuu u sahlo gudashada waajibaadkooda. Madaxweynahu wuu idin xushay qadar Allana wuu raacay, noqda cududa uu Madaxweynahu wax ku fuliyo, iyo maskaxda u soo jeeda baahida dadweynha, xilkana ku guta sidaad u dhaarataan, sinaan iyo cadaalad ayaa leydinka fadhiyaa. Xilkana ku waarimeysaan ee waa waxaad taariikhda gashataan waxa idiin waari doona.
Waa qormadii afraad ee geedi-socodka dimuquraadiyadda furan ee adduun weynaha. Ujeedada socdaalkeena taariikheed waa inaynu dhabadii la soo maray dib u qaadno, si aynu daawo ugu helno xanuunada aafeeyey nidaamka aynu qaadanay.
Inta aynaan u gudbin mas'uuliyadda looga baahan yahay dawlad dimuquraadi ah, aynu ku nagaano qaybtii matalaada ee aynu qormooyinkii hore ku gorfeynay, annigoo qormadan ku soo gunaanadi doona matalaadda iyo qiimaha ay leeday inuu noqdo codbixiyahu qof waaci ah oo garanaaya waajibka cod-bixinta.
Innagoo soo aragnay in halgankii loo galay HAL QOF, HAL COD, oo ay hogaaminayeen aqoonyahanka iyo ururada bulshadu, waxa is weydiin leh dalkeena kaalinta ay kaga jiraan colkaasi. Waxa hubaal ah inayna wax raad ah ku lahayn jaamacadaha, aqoonyahanka, iyo ururada tirada badan ee bulsho ee dhowaan sida waarigta u soo foocay. Kowaas oo dhan kaalinta wacyigelinta dadweynha ayaa xil ka saaran yahay. Waxa waajib ku ah inay la yimaadaan doodo dantoodu tahay in garaadka dadka kor loo qaado, in qabiilka iyo kala faquuqa lala dagaalamo, in mas,uulka iyo shacbiga loo dhig dariiq ay ku xisaabtamaan. INtuba wey ka maqantay madasha siyaasadda.
Kolka cod bixiyo garto awoodiisa siyaasadeed, iyo inuu isagu yahay isha ay ka unkanto awoodda dawladdu., ay tahay mid ay isaga ka farcantay ooy wakiilnimadiisa ku kasbadeen, waxa ilko yaxaas yeelanaysa la xisaabtanka dawladda oo ku soo uruuraysa gacmaha dadweynaha. Waxa ay aqoonsanayaan hawl wadeenada dawladdu inay yihiin shaqaale u adeega dadweynha bixiya mushaharkooda, ciddii hawshoda ka soo bixi weydana ay tusi karaan dhabbada loo maro suuqa shaqo la'aanta
Xukuumadda iyo dadweynaha waxa u dhexeeya Golaha Wakiilada ooy u igmadeen inay xukuumadda ku ilaaliyaan sharciga iyo nidaamka dalka u yaal.Dadweynahu waxay tahay inay gartaan cidda matalaysaa inay tahay wakiilada oo ay kula xisaabtamaan wax qabadkooda mid midna u eegaan .
Haddaba dalalkan galbeedka ee ku socda nidaamka dimuquaadiyada furani, waxa ay gaadheen heer dhab ahaan awooddu gacanta shacbiga ugu jirto. Waxaad taas arkaysaaa marka aad ka qayb qaadato shirarka Madaxdu la yeelato dadweynaha. Waxa kuu muuqanaysa dhacdo aad uga duwan tan looga bartay madaxda Afrika iyo Carabta. Ma jiraan ciidan hubaysan iyo dhar cad dadka juuq dhegaystaa, waayo waxa meesha joogaa waa madaxda oo hor timi ciddii shaqada u qoratay, mushaharkoodana bixiya oo ka raba xisaab iyo xog waran. Cidi uma dhaxayso, suâ€™aalahana waxa leh shacbiga, dhididka iyo madax foorarkuna waxa uu la saaxiib yahay madaxda. Waxaad maqlaysaa ereyga, haddaanu nahay cashuur bixiyaasha ( Tax Payers). Waa erey kolka codbixiyo laabta gashado siinaysa geesinimo iyo dhiranaan uu nin kasta oo xil dawladeed haya kula xisaabtamo, isagoon libiqsanayn, bal se indheha ku caddeynaaya shaqaalihiisa uu hawsha ka sugaayo.
Madxadu waxay ogtahay in xisaabtan adag dadweynahu xaq u leeyahy, haddayna u diyaar garoobina ay xilka waayi doonaan. Xildhibaan kasta iyo Wasiir kastaa waxuu jecel yahay inuu cidda u soo cabata sida ugu habboon wax ugu qabto, isagoon u eegeen inuu yahay qof u codeeyey iyo in kale, waayo haddaanu u codeyn waa mid uu u baahan yahay inuu xeradiisa ku soo xidho, haddii uu u codeeyeyna inuu kalsoonidiisa sii adkeeyo.
Mar walba waxa boqor ah dadweynaha. Siyaasi weyn oo arrintan ka hadlay waxuu yidhi, --- Waxaan ugu jecelay kolka muwaaadin cabanayaa ii yimaado, waxaan u guntadaa inaanu marna iga tegin isagoon qalbigiisu kalsooni buuxda igu siin. Maalinta aan waayo cid cabanaysa, waa maalin aan ii tirsanayn. Ninka qof toos ugu soo cowday kalsoonidiisa kasban waayaa, ma noqon karo siyaasi dimuquuradi ah.
Ereyga iigu dambeeyaa, waa in la helaa doodo aqoonyahanno oo ku dhisan aqoon aan xisbiyeysneyn hormoodna ay ka noqdaan jaamacaduhu . Ma kula tahay in la dhiso ururo mihnadeed si inta isku dan ihiba u yeelato mel ilaalisa dantooda, taas oo toos u wiiqi doonta qabyaaladda.Maxaa ragaadiyey doorka Jaamacadaha looga baahnaa dhinaca dhismaha bulshada iyo horumarinta hilinka dimuquuradiyadda. Arrimahani waa qaar u baahan inaynu u aragno wadar ahaan, innagoon dawlad iyo shacbi kala soocneyn, innagoon mucaarid iyo muxaafid u kala baxayn.
Aan idinku maca-salaameeyo in aynu noqono dad wada dooda oo doodoodu ka fogtay shakhsi toocsi, iyo qabiil dirir iyo gobalaysi. Doodo danta guud ah iyo meelaha nidaamkeenu uga baahan yahay kabidda, aynu noqono dar isku duuban kolka ay timaado arrimaha qarannimada, aan wada ilaalino nabadda iyo wadajirka. Xukuumadda aynu dooranay aynu noqono kuwa garab gala, meelaha ay ka gaabisana si nidaamsan wax ugu sheegno. Nidaamka iyo sharciga aynu muxaafid iyo mucaaridba dhowrno
Dhawaan waxaynu geli doonaa waajibadka dawladda ooynu ku bilaabi xundhurta dadweynaha iyo xukuumadda oo ah Golayaasha Sharcidejinta.
Waa inoo maqaal kale iyo fikir aan idinla wadaago Insha Allah.
La-taliyaha Madaxweynaha ee Dhaqaalaha,
Labels: AHMED ARWO, Democracy, Maqaalada Ahmed Arwo, POLITICS, Somaliland